Wiil u dhalay Xaaji Abuukar Cumar cadaan oo lagu dilay Magaalada Nairobi ee Dalka. « AYAAMO TV
Wiil u dhalay Xaaji Abuukar Cumar cadaan oo lagu dilay Magaalada Nairobi ee Dalka.
2375 Views Date April 5th, 2014 time 7:15 am
Wararka ka imaanaya Magaalada Nairobi ee Dalka Kenya ayaa sheegay in xalay Magaaladaasi lagu dilay Wiil uu dhalay ganacsade Xaaji Abuukar Cumar Cadaan .
Kooxo Hubeesan oo gaari watay ayaa la sheegay in ay isku hor gooyeen gaari uu watay Ganacsade Saciid Xaaji Abuukar Cumar Cadaan Xili uu marayay Laamiga Mombasa Road ee Magaalada Niarobi , Kooxaha Hubeesan ayaana xiligaa kadib rasaas badan huwiyay ganacsadaha.
Gancsadaha oo ku dhacday dhoor xabadood ayaa durba goobtaasi ku geeriyooday ,kooxihii dilka geestay ayaana la tilmaamay in gaariga uu watay Marxuunka ay ka qaateen Cumputerka Gacanta iyo alaabo kale oo gaariga u saarnaa.
Kooxihii dilay Siciid Xaaji Abuukar Cumar Cadaan ayaa ka baxsaday goobtii ay ku dileen , Booliiska Kenya ayaana sheegay in ay wadaan baaritaano ay ku baadi goobayaan kooxahii ka dambeeyay Dilka ganacsadahan.
Magaalada Nairobi ee Dalka Kenya ayaa mararka qaarkood waxaa ka dhaca dilal qorsheesan iyo kuwa Burcadnimo ku saleesan oo loo geesto dadka magaca ku leh Dalka Soomaaliya , waxaa marar kala gadisan Magaaladaasi lagu dilay Siyaasiyiin iyo ganacsato Soomaaliyeed.